5 Tilmaamood Oo Aad Ku Qaadan Karto Buug-yarahaaga Ganacsi Darajo | Martech Zone
5 Tilmaamood oo aad ku Qaadan Karto Buug-yarahaaga Ganacsi Sare
Axad, Abriil 12, 2015 Douglas Karr
Iibintaada hal-xaashi, xirmada warfaafinta, buug-yaraha, PDF, buug-yaraha wax soo saarka… wax kasta oo aad rabto inaad ugu yeerto, waxay u baahan tahay caawimaad. Dhawaan waxaan isla meel dhignay a qalabka warbaahinta & kafaalaqaadka goobta ka dib codsi kadib codsi kadib.
Xaqiiqdu waxay tahay, dadku wali waxay jecel yihiin inay soo dejiyaan oo daabacaan dukumiintiyada welina waxaan jecel nahay inaan gacanta ugu qaybino waxyaabaha daabacan. Ma aha in la xuso xaqiiqda ah in gabal daabacaad qurux badan ay heli karto xoogaa dareen ah. Waxay isu beddeleysaa kala duwanaansho iyo in badan oo ka mid ah farriimaha tooska ah iyo ololeyaasha tooska ah ee loo qaybiyo waxay u muuqdaan inay kor u kacayaan jawaabta maxaa yeelay ma jiraan tartan badan halkaas.
Baahan Daabac gudaha Ireland ayaa soo saaray sawirkan si ay kuu siiyaan talooyin kaa caawin doona inaad hesho dareen dheeraad ah oo ku saabsan kharashkaaga, Abuuritaanka Warqad Ganacsi oo Hufan.
Ogow waxaad tiraahdo, ciddaad u sheegeyso, sidaad u dhahdo, waxaad u muuqataa qof xirfad leh hana u oggolaan inay fadhiistaan ​​shaqo la’aan. Cabirka, cinwaanka, qaabdhismeedka jumlada, sawirada, midabada iyo - intabadan - wicitaanka-ficilku, waxay lagama maarmaan u yihiin buug yarahan waxqabadka weyn. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad isticmaasho nooc ka mid ah raad raaca taleefanka ama URL la socon karo oo ku yaal gabalka si aad u ogaato kuwa ka fiican kuwa kale.
Waxaad ubaahantahay Daabacaad Waxay kugula talinaysaa Qaaciddada AIDA:
Attention - Ka dhig indho qabasho.
Interest - Akhristaha xiise u yeelo.
doonayay oo - Abuur rabitaan adoo adeegsanaya sawirro iyo macluumaad qancin kara.
Action - Ku dhiirrigeli akhristaha inuu tallaabo qaado.
Tags: caawiyayQoraalkanNaqshadeynta buug-yarahabuug-yarahaanxirmo warbaahinu baahan daabacBaafinhal-xaashinaqshad hal-xaashi ahpdfbuuga warbixintaiibinta hal-xaashixirmada kafaalaqaadka
Hayso Gacantaan: 10ka Xeerar ee Cusub ee Wada Xiriirka Dhibaatada
Abriil 21 waa Google's Mobilegedden! Liiskaaga hubinta ee mobilada SEO